Doland Trump oo ku dhawaaqay hadal ka careysiiyey mid ka mid ah dowladaha waaweyn ee caalamka!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Doland Trump oo ku dhawaaqay hadal ka careysiiyey mid ka mid ah dowladaha waaweyn ee caalamka!!
Doland Trump oo ku dhawaaqay hadal ka careysiiyey mid ka mid ah dowladaha waaweyn ee caalamka!!
Dec 12, 2016WARAR
Madaxwaynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa shaki geliyay in Maraykanku uu sii wadi doono siyaasaddiisa ku aadan in Shiinuhu uu hal dal yahay, waxaana hadalkaasi caro xoogan ka qaaday dowlada China.
Siyaasadaasi waxay tahay in Maraykanku uu cilaaqaad rasmi ah la leeyahay Shiinaha badalkii uu la yeelan lahaa jasiiradda Taiwan oo Shiinuhu uu u arko gobol ka tirsan.
Maraykanka ayaa xiriirkii rasmiga ahaa u jaray Taiwan sanadku markuu ahaa 1979kii, wuxuuna aqoonsigiisii u wareejiyay Shiinaha, arrintaas ayaana horseeday inuu sii hagaago xiriirkooda.
Balse Trump ayaa sheegay in aysan jirin sabab ay arrintan u sii socoto iyadoo aan Beijing laga haynin wax tanaasul ah.
Waraysi uu siiyey Fox News ayuu Trump ku sheegay in uusan garanaynin sababta ay u ilaalinayaan siyaasadda Shiine midaysan iyadoo aan heshiis lagula galin Shiinaha arrimo kale oo ay ka mid yihiin ganacsiga.
Trump waxaa kale oo uu sheegay in Shiinuhu uusan iskaashi kala samaynaynin Maraykanka arrimaha lacagihiisa, Kuuriyada Waqooyi iyo waliba dareenka ka taagan koonfurta badda Shiinaha.
Dowladda China ayaa hadalka Trump si caro leh uga jawaabtay, waxayna sheegtay iney walaac dhab ah ay ka qabto hadalkan oo ay ku tilmaantay mid laga yaq-yaqsado.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda China ayaa sheegay in siyaasaddaas oo sheegeysa in Taiwan ay qeyb ka tahay China, ay saldhig u tahay xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka.
China waxay sheegtay in haddii Trump uu taageero madax banaanida Taiwan ama uu hub ka iibiyo, in China aysan Washington kula saaxiibi doonin arrimaha caalamiga ah, ayna taageero milatari ugu yaboohi doonto kuwa Mareykanka ka soo horjeeda.
Warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa sheegtay in hadalka Trump uu yahay mid caruurnimo ah, uuna u baahan yahay inuu diblamaasiyadda wax ka barto.
Previous PostMUUQAAL: Doorashada Soomaaliya ka socota oo dalka gelisay Lacag badan iyo goobo badan oo shidmay DAAWO!! Next PostDowladda Soomaaliya oo baaritaan ku bilowday xoolahii laga soo celiyay dalka Sacuudiga!!